Tag: kuverenga mazwi | Martech Zone
Tag: kuverenga mazwi
11 Kukanganisa Kudzivisa NeYako Email Kushambadzira Campaigns
Muvhuro, March 1, 2021 Svondo, Kurume 7, 2021 Douglas Karr
Isu tinowanzo govana izvo zvinoshanda neemail kushambadzira, asi zvakadii nezve izvo zvisingashande? Zvakanaka, Citipost Mail yakaisa pamwechete yakasimba infographic, zvinhu gumi zvausingafanire kusanganisa mune yako email Campaign iyo inopa ruzivo rwezvinofanira kudzivirirwa kana uchinyora kana kugadzira yako maemail. Kana iwe uchida kubudirira neemail kushambadza, heano mamwe epamusoro faux-pas iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekudzivirira kana zvasvika pazvinhu zvausingafanire kuisa mune yako
Zvemukati Raibhurari: Chii Icho? Uye Nei Yako Yemukati Yekutengesa Sarudzo Iri Kukundikana Pasina Iyo
Chipiri, February 23, 2021 Chipiri, February 23, 2021 Douglas Karr
Makore apfuura taive tichishanda nekambani yaive nemamiriyoni akati wandei ezvinyorwa zvakaburitswa pane yavo saiti. Dambudziko raive rekuti mashoma kwazvo ezvinyorwa akaverengwa, kunyangwe mashoma akaiswa muzvinjini zvekutsvaga, uye isingasvike muzana muzana yadzo yaive nemari yakatorwa kwavari. Ndingakupikise kuti uongorore raibhurari yako yezvinyorwa. Ini ndinotenda iwe unogona kushamisika kuti ndeapi muzana emapeji ako ari anozivikanwa uye anobatanidzwa newe
Iko Kukanganisa kweZvemukati-Kureba Pane Yekutsvaga Injini Chinzvimbo uye Shanduko
Chishanu, Mbudzi 20, 2020 China, Kukadzi 25, 2021 Douglas Karr
Kwenguva yakareba kwenguva refu, ini ndanga ndichingoedza kubvunzana neakatanga mari uye nemakambani makuru emabhizimusi nekuti ndaiziva kuti ndaizokwanisa kufambisa tsono yekushandura nemakambani aive nezviwanikwa uye nguva yekutora chikamu chemusika. Gore rakapera, kekutanga, ndakafunga kushandisa matekiniki akafanana andakashandisa kumakambani ane matunhu, makambani madiki…
4 Akakosha Matanho Ekuti Yako Yakawanda-Nzvimbo Bhizinesi Pamhepo
Chishanu, January 5, 2018 Svondo, Ndira 7, 2018 Douglas Karr
Haisi nhamba inoshamisira, asi ichiri kutemesa musoro - inopfuura hafu yezvose-zvitoro zvekutengesa zvakakanganiswa nedhijitari gore rapfuura mune yavo yazvino infographic pakutengesa yako yakawanda-nzvimbo bhizinesi online. MDG yakatsvagurudza ndokuona mana akakosha ekushambadzira matekinoroji ayo bhizinesi rega rega renzvimbo zhinji rinofanirwa kunge riri kuisa iro rinosanganisira kutsvaga, chikuva, zvemukati, uye maitiro echishandiso. Tsvaga: Optimize ye "Vhura Izvozvi" uye Nzvimbo - Vatengi vari kuchinja kubva mukutsvaga izvo zvemberi-zvakavakirwa zvinhu senge
Yakawanda Sei Zvemukati Zvinogadzirwa Pamhepo mumasekondi makumi matanhatu?
Chipiri, June 6, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
kunyanyaUngave wakacherekedza huremu mune yangu kutumira kwazvino. Nepo kuburitsa zuva nezuva kwave chikamu cheDNA yangu mumakore achangopfuura, ndiri zvakare kupokana nekusimudzira saiti uye nekupa akawanda uye akawanda maficha. Nezuro, semuenzaniso, ini ndakaenderera neprojekti yekubatanidza akakodzera machena mapepa kune ino saiti. Icho chirongwa chandakachengetera rinenge gore rapfuura uye saka ndakatora nguva yangu yekunyora ndikachichinja kuita coding